ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်များ စဉ်းစားချင့်တွက်စေချင်	Posted on March 29, 2012	by nyuntshwe ရေးသင့်တာကတော့ အတော်ကြာသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖန်ကလပ်ဗ်က ဝက်ဝက်ကွဲဆိုတော့ အကျယ်အကျယ်တွေ လာနေမှာ စိတ်ရှုပ်တာနဲ့ မရေးဖြစ်ဘူး။ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ မနေနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာသာ သတ္တိမွေးပြီး ဇွတ်ရေးချလိုက်ကြရတာပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွှေဘောတော်ငြိုမှာ အမျက်တော်ရှမှာမျိုးကို ဘယ်သူမဆို လက်ရှောင်ချင်ကြမှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ ကျနော်လဲ “ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်စွ၏ ဆိုစများလျား ထားပချေမိ ငါ့ဝန်ရှိခဲ့” အဖြစ်မခံချင်လို့ ချရေးလိုက်ပါပြီ။
ဒေါ်စုတို့ ပြည်နယ်တွေမှာ ဝင်မပြိုင်သင့်၊ ကိုယ့်သွေးချင်းတွေရဲ့နေရာကို အထူးသဖြင့် အခုလို ပြည်ထောင်စုသားတွေ ရင်ကြားစေ့ဖို့ အဖက်ဖက်က ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီလို လုံးဝမလုပ်သင့်။ ဒီချုပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကြားမှာ မဲတွေ ပြားမသွားသင့်။ ဖျံ၂ကောင် အစာလုရင်း မြေခွေးက ရင်ဘတ်ပိုင်းရသွားအောင် မလုပ်သင့်။
ပြည်ပက ရေဒီယိုတိုင်းက ဆိုရင်လဲ အချိန်ပြည့်ကြော်ငြာရေဒီယိုကြီးလုပ်နေကြတာ သူတို့မို့ မရှက်ကြတယ်လို့ပဲ သြောချရပါတယ်။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကို မကောင်းတတ်လွန်းလို့ မျှတသယောင်လုပ်ချင်မှ နည်းနည်းလေး နေရာပေးပါတယ်။ ဟိုဖက်က တစ်ခုခုများ မမှားလိုက်နဲ့ ဆော်စရာအပေါက်များ မဟလိုက်နဲ့၊ အဲဒီအနာအဆာကို လူတွေကြားစေ့ချင်တာနဲ့ကို ဒါမျိုးကျတော့ အကြိမ်ကြိမ်လွှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာ မီဒီယာကျင့်ဝတ်မှ သူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုချည်းပါလား။ အချိန်ကတော့ လက်မတင်လေးပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒီစာကို ကျနော် ဒီချုပ်ကိုလဲ သီးသန့်ပို့ပါမယ်။
လွှတ်တော်ထဲမှာ အဲဒီတိုင်းရင်းသားအမတ်တွေ အဖွဲ့တွေဟာ ဒီချုပ်ရဲ့မဟာမိတ်တွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်လို့ သူတို့စိတ်ကွက်ရင် အခုဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သံသယတွေ မယုံသင်္ကာမှုတွေဟာ ပိုပြီးသာ ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။
အတိတ်ကံကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီးဖြစ်လို့ တိုင်းခြား လူမျိုးခြားနဲ့ယူထား လူမျိုးခြားသားမြေးတွေရှိနေတာတောင် အခုလောက် နေရာရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုကသာ ဒီအခြေခံမရှိရင် အပေါ်ကို လုံးဝမှ မတက်လာနိုင်ပါဘူး။
A Myanmar, Buddhist, pacifist, and pragmatic person who believe that we are what we think. That leads him positive thinking and he sees the worldabeautiful place, but he still likes to keep trying forabetter and more beautiful world.	View all posts by nyuntshwe →	This entry was posted in Critiques. Bookmark the permalink.	← Myanmar’s by-elections and its future prospects